Kwiintsuku ezindala kwiitrhefti zeentengiso onokuzibona kuphela i-suhariki kunye nembewu ye-poppy okanye i-mustard crackers, ehambelana ne-GOST. Ngelo xesha, kubonakala iindidi ezininzi zazo zonke iindidi zabaphangi ezinikwa iziyobisi. Ukukhethwa kwamathandi kunye nabavelisi kakhulu. Ezi zintlanzi ziye zaba unyango kubantwana abaninzi. Kodwa akuyena wonke umntu owaziyo ukuba lo mkhumbi ufihle ngasemva kwakhe. Kuba abalandeli bee-crackers isisombululo esihle kukupheka ekhaya. Amacroutons anjalo aya kuba neentlobo eziphuculisayo zokunambitheka, i-flavour kunye nedayi, kwaye kuya kuba neenzuzo ezininzi kubo kunokuthengwa. Kodwa musa ukulibala ukuba nayiphi na imveliso inezibonelelo zayo kunye neengxaki. Kwaye kukho kule nto kufuneka siyiqonde le nqaku "Abaphangi basekhaya: bazuze kwaye balimale."
Okokuqala, unokwenza uvavanyo, olu hlobo lulandelayo: uthathe nayiphi na i-cracker kwiphakheji oyithandayo uze uyibeke kwipiniki elomileyo, ucinezele ngenye indlela. Kule meko, unokwazi ukubona ukuba umkhondo onamafutha uhlala kwi-napkin emva kwe-cracker. Oku kuphakamisa ukuba ukulungiswa kwabaqhiqhi basebenzisa ioli e-mafutha akuyona into esemgangathweni, leyo, eqinisweni, inomxholo ophezulu we-cholesterol.
Ukusetyenziswa kwabanqabileyo kwixesha elizayo kungekudala kunokukhokelela kwizifo zesisu, isisu, inkqubo yokucoca kunye neenkqubo ezahlukeneyo ezivuthayo.
Kwesinye isiqhekeza, isantya setyuwa equkethwe ngokulingana ne-pinch. Kwaye ngoku khawucinge nje ukuba uninzi kangakanani ityuwa ngokuyidla ipakethe yonke, kwaye kufuneka kuphawulwe ukuba abaninzi abantu abadala kunye nabantwana badla usuku alukho enye ipakethe efana nabaculi.
Xa kungabikho ixesha lokwanelisa indlala, abantu banokuthenga abathengi kwiindawo ezikufuphi. Ngokuqinisekileyo, ixabiso elincinci kune-cack in cafe, kwaye kulula kunokuba uzilungiselele ukutya, kodwa umxholo kuphela owenkcenkceshela ngamakhemikhali ubonisa ukuba unyango olulandelayo lunokuthatha ixesha elininzi kunye nemali.
Ukuthenga abaphangi kwivenkile, ukuze uphephe ukulimala kufuneka ufunde indlela yokuzikhetha. Ngokomzekelo, i-croutons ye-mustard iqukethe ishukela encinci, ngoko kuya kuba luncedo kwizidlo ezinomzimba. I-Sesame kunye ne-poppy, equle kwi-breadcrumbs, yandisa ukondla kwaye iphucula ukutya. Nabantu abanesifo senhliziyo, ezichithwe ngokungqalileyo ekusebenziseni ityuwa kunye noshukela ngobuninzi, abayi kwenza nantlungu nababhiqiza.
Izixhobo zokuzilungisa ezizilungiselelayo: zilungile.
Inzuzo yabaqhiqizi basekhaya balala, ukuba kuphela kwinto yokuba xa ulungiselela, awuyi kubonakalisa impilo yakho ngokuzifakela epanini yokupanda okanye kwi-oven, kwaye uya kukwazi ukunciphisa ukusetyenziswa kweoli neryuwa. Yaye, ukuba ungeze imbewu yeesame okanye imbewu ye-poppy, uya kunceda ukugaya kwakho.
Njengamanje, abapheki bezonka besetyenziselwa ukusebenzisa imveliso ye-cereal, i-sesame, i-poppy, i-parsley omisiweyo okanye i-anyanisi. Ukusetyenziswa kwezi mveliso ekulungiselelweni kwabaqhiqizi bekhaya abayikuphucula kuphela intle, kodwa banokufaka isandla kwigazinyo zabo, beshiya umzimba usebenzise izicucu zokutya kuphela.
Inendima ebalulekileyo yabaphangi kunye nobutyhefu, xa umzimba ufuna ukuhlanjululwa nokutya okuxhomekeke. Kwiimeko ezinjalo, oogqirha bancoma ukuba badle kuphela i-kefir, i-yogurt yogurt, amanzi amaminerali (mhlawumbi ngaphandle kwegesi) kwaye atshintshe isonka kunye nabaqholi. Baya kunceda ukulungelelanisa umsebenzi wesisu nokubuyisela imikhosi yamandulo emva kokutyhefuza.
Abaphangi basekhaya: bungozi.
Ukususela ekusebenziseni i-croutons yasekhaya, kukho inzuzo kunye nenzakalo. Nangona bokuba banzima, abaqhiqhi bahlala bemveliso yokubhaka, ebonisa umxholo wabo wekhalori, ongafani nazonka ezithambileyo. Ngaphezu koko, musa ukulibala ukuba ngesimo esomileyo isonka esinjalo sisetyenziselwa ukutya kunokulula kwaye ngokukhawuleza kunokutsha. Isiphetho - kwaye sidla iikhalori ezininzi.
Akukhuthazwa ukuba badle i-crackers kunye nesisu esingenalutho, oku kungakhokelela ekuqhubeni isistim kwinkqubo yokutya, kwaye ukubuyela kwijusi yesiqhelo eqhelekileyo kuya kuba nzima kakhulu. Ukungaphumeleli komsebenzi wesondlo somzimba kunokukhokelela ekuphazamiseni imeko yangaphakathi yomzimba, kwaye iibhaktheriya ezinobungozi ziza kuba nethuba elihle lokubethelela abancedisi bakho ekudleni nokutya ukutya.
Ukuba ufuna ukutya iikhalori ezincinci kunye negalelo ekujongeni ukugaya ukulula, abaqhibanisi bangathathwa ukuze badle ukutya, batyeke itiye.
I-recipe yokupheka ama-croutons ayenziwayo.
Kwabahlaziyi banamhlanje baqulethe inani elikhulu lamaphupha ahlukeneyo, i-carcinogens eyingozi kunye neentambo zokuphucula, ezingenakukwazi ukuzisa nayiphi na inzuzo, ngoko kubantwana abathanda abaphangi, kungcono ukuwapheka ekhaya. Ku luncedo ngakumbi ukuzisa i-crunches ephekwe ngaphandle kokusebenzisa ioli, kunye ne-poppy, ivenki okanye i-sesame eyongeziweyo kubangelwa ukondla. Abakhiqizi abenzile ekhaya banempahla enhle - banokugcinwa ixesha elide, ngokungafani nesonka, esinzima kwaye emva kweentsuku ezimbalwa zihlanganiswe ngumbumba. Amacroutons anjalo angahlala etafileni ixesha elide aze asebenze njengelongezelelo olungcono kwitiyi.
Ukulungiswa kwama-croutons ngeke kube nzima kwaye kubize. Kuya kuthatha isonka sesonka okanye isonka, esifanele sinqunywe kwiziqephu kwaye sibeke kwiphepha lokubhaka, omisiwe kwihovini, kodwa kungekhona ekushiseni okuphezulu. Xa kushushu, unokomisa isonka kwisitrato, uzibeke kwindawo ecocekileyo.
Namhlanje, izifo zesigxina sesigxina, esona sizathu sokusetyenziswa rhoqo "kokutya okomileyo", ngoko kuyacetyiswa ukuba ukhethe ngokukhawuleza i-breadcrumbs, kwaye kungcono ukufumana ixesha lokulungiselela kwabo ekhaya. Kwaye awukwazi ukuphikisana nenyaniso yokuba abaphangi abancinci baninzi kwaye banomsebenzi.
Ukutya okumanzi: iingxaki zexesha kunye nendlela yokujongana nazo
Iimbangela zokungabi namandla okanye ukunyanzelisa
Iinkonzo ezintsha ze-AIDS
Ukugxotha kwi-pan yokucima
Isidlo esinesitshalo seqanda
Iipotcake zepatato ngamathanga kunye ne-orange